Ahoana ny fomba ahazoana ny tsimbadika farany an'ny VLC amin'ny Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Ahoana ny fomba ahazoana ny tsimbadika farany an'ny VLC amin'ny Ubuntu 18.04
VLC dia iray amin'ireo mpilalao malaza indrindra sy feno izay hitantsika amin'ny Ubuntu. Na izany aza, ity mpilalao ity dia tsy manana ny kinova farany ao amin'ny tranokala ofisialin'ny Ubuntu, izay mahatonga antsika hamoy ny fampiasa sasany.
Ary raha tsy ny Ubuntu 18.04 dia manana Ubuntu 16.04 isika, ny olana dia matotra kokoa avy eo Ny dikan-teny VLC dia tsy mifanaraka amin'ny gadget toy ny chromecast. Fa io dia azo amboarina mora foana ao amin'ny Ubuntu.Iray amin'ireo fomba mahomby indrindra ny fananana ny kinova VLC farany indrindra dia ny fampiasana ilay fonosana haingana. Amin'izao fotoana izao, amin'ny alàlan'ny mailaka dia ahafahantsika mametraka ny kinova farany an'ny VLC ary koa ny kinova fampandrosoana.
Azontsika atao koa ny mampiasa repositories ofisialy VLC izay azontsika ampiasaina amin'ny Ubuntu. Na ahoana na ahoana, andao hifidy fomba iray na hafa, alohan'ny hamongorana ny kinova VLC izay ananantsika. Satria ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny default dia hampiasa ny kinovan'ny repositories fa tsy ny kinova snap na ny VLC repository.
Mba hamafana ny kinova VLC dia mila manokatra terminal izahay ary manatanteraka ireto manaraka ireto:
Vantany vao nesorinay ilay kinova taloha, ny kinova vaovao dia azo apetraka miaraka amin'ny baiko:
Ary raha te-hametraka ny kinova fampandrosoana izahay dia tsy maintsy manatanteraka ireto manaraka ireto:
Raha misafidy isika ny tahiry VLC PPA, avy eo ao amin'ny terminal dia tsy maintsy ataontsika izao manaraka izao:
Amin'izay hapetraka ny kinova VLC farany. Tsotra ny fizotrany saingy tiako ny manasongadina fa tsy maintsy esorinay ilay kinova taloha alohan'ny hampiasana ireo fomba ireo nanomboka teo fa ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny default dia hampiasa ilay kinova taloha fa tsy ny kinova maoderina, izay hananantsika olana sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fomba ahazoana ny tsimbadika farany an'ny VLC amin'ny Ubuntu 18.04
Fernando Robert Fernandez dia hoy izy:
Tsy misy isalasalana, ilay mpilalao haino aman-jery tsara indrindra.
Valiny tamin'i Fernando Roberto Fernandez
Pedro Gonzalez placeholder image dia hoy izy:
Tsy misy isalasalana fa izy io no mpilalao horonantsary feno indrindra… Tokony hoentin'ny default amin'ny alàlan'ny Ubuntu….
Valiny tamin'i Pedro Gonzalez
Pirate dia hoy izy:
SMPLAYER ny tsara indrindra.
Valiny amin'ny piraty
Gersain dia hoy izy:
Mitovy hevitra aminao aho!
Valiny ho an'i Gersain
Horace Alfaro dia hoy izy:
Alefaso ity lesoka ity rehefa manampy ny tahiry ary manavao azy
Mandiso: 18 http://ppa.launchpad.net/videolan/stable-daily/ubuntu bionic Famotsorana
Valiny tamin'i Horacio Alfaro
Jimmy olano dia hoy izy:
Heveriko fa tsara ny mihazakazaka:
hamafana megabytes betsaka amin'ny tranomboky ho an'ny add-ons, total per snap dia hahazo kinova vaovao amin'izy ireo isika, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Jimmy Olano
laride dia hoy izy:
Salama. Misaotra betsaka tamin'ity asa mahaolona ity! Fahombiazana!
Valiny tamin'i Laride
Manana olana amin'ny fametrahana azy amin'ny 20.04 aho, misy hevitra ve?
Fiadanana Aniceto dia hoy izy:
ubunto no tsara indrindra / solomaso.
Valiny tamin'i Aniceto De Paz
CPU Power Manager, mifehy ary mitantana ny fahita matetika CPU
Ahoana ny fametrahana sy fametrahana ny lohahevitra feo ao amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?